အလုပ်ပြီးချိန် ညခင်းတွေမှာ မင်းဘာလုပ်လဲဆိုတာက မင်းရဲ့ အနာဂတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ် - Tameelay
တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလောက် ဒါတွေလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ မင်းဘဝပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။
မင်းရဲ့ အလုပ်ချိန်ညနေ6နာရီမှာ ပြီးပြီးတော့ မင်းက ည သန်းခေါင် 12 နာရီမှ အိပ်ရာဝင်တယ်ဆိုပါစို့။
ဒီကြားထဲက6နာရီကို မင်းဘယ်လိုအသုံးချပါသလဲ? TV ကြည့်တာလား?
တကယ်တော့ ဒီအချိန်ကို မင်းဘယ်လိုအသုံးချတယ်ဆိုတာက မင်းထင်တာထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်လူတော်တော်များများထင်နေတာက
ကျွန်တော်တို့ career ကို တိုးတတ်ဖို့ အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာ
ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့ပဲ ထင်နေကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနာဂတ်နဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ ခေါင်းဆောင်အပေါ်ပဲ မူတည်နေတယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။
တကယ်လို့ မင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘဝမှာ တိုးတတ်မှုမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ မင်းရဲ့ အလုပ်နဲ့ မင်းရဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကို မင်းအပေါ် မြေတောင်မြှောက်မပေးလို့ဆိုပြီး
အပြစ်တင်လို့မရပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတတ်အောင် ပျိုးထောင်ဖို့ဆိုတာ မင်းရဲ့ တာဝန်ပါ။
မင်းဟာ မင်းရဲ့ ညခင်းအချိန်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတာဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
စာဖတ်ပါ။ ဘဝမှာ မင်းလိုချင်တာရဖို့ knowledge က အရေးကြီးပါတယ်။
ဗဟုသုတတွေ စုဆောင်းရပါမယ်။ ဒီလို ဗဟုသုတတွေကို မင်းရဲ့ အလုပ်မှာ မင်းရဲ့ ဘဝမှာ ပြန်လည်အသုံးချကြရပါမည်
တကယ်လို့ မင်းက စာဖတ်သန်တယ်ဆိုရင် မင်းဗဟုသုတတွေ ပြည့်ပြီး မင်းရဲ့ စကားပြောတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ အကြောင်းအရာတွေ
ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ Anthony Robbins က ပြောပါတယ်။
တကယ်လို့ မင်းဟာ တစ်နေ့ကိုတစ်နာရီအချိန်ပေးပြီး အကြောင်းအရာတစ်ခုကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ မင်းရမဲ့ knowledge တွေက
ကမ္ဘာ့လူတွေရဲ့ 99.999 % လောက်ထိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။
တစ်နေ့ကို အချိန် သုံးဆယ်မိနစ်လောက်ပဲ စာဖတ်ချိန်ပေးနိုင်ရင်တောင်တစ်နေ့တစ်နေ့ knowledge တွေ အများကြီးရမှာပါ။
မင်း expert မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင် မင်းရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေထက် ပိုပြီးဗဟုသုတများလာမယ်ဆိုတာ အာမခံနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မင်းရဲ့ လက်ရှိအလုပ်က မင်းတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် မင်းဟာ ဒီအချိန်တွေမှာ မင်းတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေ လေ့လာလို့ရပါတယ်။
ဒီလို ရတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေ လေ့လာပြီး အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာ မင်းရဲ့ career ကို ပြောင်းလိုက်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
start up တစ်ခု စလိုက်လို့ရပါတယ်။ project တွေ လုပ်ဆောင်ပါ။
မင်းရဲ့ ဗဟုသုတတွေ စိတ်ကူးတွေကို ပုံဖော်ဖို့ မင်းအလုပ်က အခွင့်အရေးမပေးရင်မင်းကိုယ်တိုင် ရှာဖွေလုပ်ဆောင်ပါ။
volunteer project တွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ဝါသနာတူတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး အဖွဲ့လိုက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြည့်ပေးပါစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေ လေ့လာပါ။ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။
Network တည်ဆောက်ပါ။ မင်းရဲ့ အလုပ်လမ်းကြောင်းမှာ ဖြောင့်ဖြူးဖို့ strong connection network တစ်ခု ရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ မင်းရဲ့ အချိန်ထဲက ဖဲ့ပြီး လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
အတော်ဆုံး မိတ်ဆွေတွေကို ဆက်သွယ်ပြီး သူတို့ရဲ့အကြံဥာဏ်တွေ ရယူတာတွေ သတင်းတွေ အချက်အလက်တွေ ဗဟုသုတတွေ ရအောင်လုပ်ပါ။
professional life ထဲကဆရာကြီးတွေဆီက လေ့လာသင်ယူကြပါအလုပ်က အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ဒီလို ညချမ်းတွေမှာ အနားယူတယ်ဆိုပြီး movie ကြည့်တာ
tv ကြည့်တာ game ကစားတာ social media ပေါ်မှာ သူများတေ အကြောင်း လိုက်စပ်စုနေတာ အတင်းပြောနေတာ ဒါတွေနဲ့
အချိန်ကုန်ဆုံးရတာ အရမ်းပျော်စရာကောင်းမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေက မင်းရဲ့ အနာဂတ်ကို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မှာ
မဟုတ်ပါဘူး။မင်းဘဝရဲ့ အပြောင်းအလဲက ဒီနေ့ညက စပါပြီ။6နာရီကနေ ည ၁၂ နာရီထိပါ။ အလုပ်ပြီးလို့ မင်းအိမ်ပြန်တယ်။ မင်းဟာ
တစ်ခြားသူတွေ ခိုင်းတဲ့အရာတွေကို လုပ်စရာမလိုတဲ့အချိန်ပါ။ မင်းရဲ့ အားလပ်ချိန်ပါ။ ဒါကို မင်းဘယ်လို အသုံးချမလဲ?
တဈနကေို့ တဈနာရီလောကျ ဒါတှလေုပျဖို့ အခြိနျပေးလိုကျပါ။ မငျးဘဝပွောငျးလဲပါလိမျ့မယျ။
မငျးရဲ့ အလုပျခြိနျညနေ6နာရီမှာ ပွီးပွီးတော့ မငျးက ည သနျးခေါငျ 12 နာရီမှ အိပျရာဝငျတယျဆိုပါစို့။
ဒီကွားထဲက6နာရီကို မငျးဘယျလိုအသုံးခပြါသလဲ? TV ကွညျ့တာလား?
တကယျတော့ ဒီအခြိနျကို မငျးဘယျလိုအသုံးခတြယျဆိုတာက မငျးထငျတာထကျပိုအရေးကွီးပါတယျလူတျောတျောမြားမြားထငျနတောက
ကြှနျတျောတို့ career ကို တိုးတတျဖို့ အလုပျခြိနျအတှငျးမှာ
ကြှနျတျောတို့ ကွိုးစားအားထုတျရမယျလို့ပဲ ထငျနကွေတယျ။
ကြှနျတျောတို့ အနာဂတျနဲ့ အလုပျအကိုငျတှဟောကြှနျတျောတို့ အလုပျလုပျနတေဲ့ ကုမ်ပဏီနဲ့ ခေါငျးဆောငျအပျေါပဲ မူတညျနတေယျလို့ ထငျနကွေတယျ။
တကယျလို့ မငျး ကိုယျ့ကိုယျကိုဘဝမှာ တိုးတတျမှုမတှဘေူ့းဆိုရငျတော့ မငျးရဲ့ အလုပျနဲ့ မငျးရဲ့ အလုပျရှငျတှကေို မငျးအပျေါ မွတေောငျမွှောကျမပေးလို့ဆိုပွီး
အပွဈတငျလို့မရပါဘူးကိုယျ့ကိုယျကို တိုးတတျအောငျ ပြိုးထောငျဖို့ဆိုတာ မငျးရဲ့ တာဝနျပါ။
မငျးဟာ မငျးရဲ့ ညခငျးအခြိနျတှကေိုဘယျလိုအသုံးခလြဲဆိုတာဟာ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။
စာဖတျပါ။ ဘဝမှာ မငျးလိုခငျြတာရဖို့ knowledge က အရေးကွီးပါတယျ။
ဗဟုသုတတှေ စုဆောငျးရပါမယျ။ ဒီလို ဗဟုသုတတှကေို မငျးရဲ့ အလုပျမှာ မငျးရဲ့ ဘဝမှာ ပွနျလညျအသုံးခကြွရပါမညျ
တကယျလို့ မငျးက စာဖတျသနျတယျဆိုရငျ မငျးဗဟုသုတတှေ ပွညျ့ပွီး မငျးရဲ့ စကားပွောတဲ့ ခေါငျးစဉျတှေ အကွောငျးအရာတှေ
ပိုပွီးစိတျဝငျစားစရာကောငျးလာပါလိမျ့မယျ။ Anthony Robbins က ပွောပါတယျ။
တကယျလို့ မငျးဟာ တဈနကေို့တဈနာရီအခြိနျပေးပွီး အကွောငျးအရာတဈခုကို လလေ့ာမယျဆိုရငျ တဈနှဈကွာတဲ့အခါမှာ မငျးရမဲ့ knowledge တှကေ
ကမ်ဘာ့လူတှရေဲ့ 99.999 % လောကျထိဖွဈပါလိမျ့မယျတဲ့။
တဈနကေို့ အခြိနျ သုံးဆယျမိနဈလောကျပဲ စာဖတျခြိနျပေးနိုငျရငျတောငျတဈနတေ့ဈနေ့ knowledge တှေ အမြားကွီးရမှာပါ။
မငျး expert မဖွဈဘူးဆိုရငျတောငျ မငျးရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှထေကျ ပိုပွီးဗဟုသုတမြားလာမယျဆိုတာ အာမခံနိုငျပါတယျ။
တကယျလို့ မငျးရဲ့ လကျရှိအလုပျက မငျးတကယျစိတျဝငျစားတဲ့အလုပျမဟုတျဘူးဆိုရငျ မငျးဟာ ဒီအခြိနျတှမှော မငျးတကယျစိတျဝငျစားတဲ့အရာတှေ လလေ့ာလို့ရပါတယျ။
ဒီလို ရတဲ့အခြိနျမှာ စိတျဝငျစားတဲ့အရာတှေ လလေ့ာပွီး အခြိနျတဈခုရောကျတဲ့အခါမှာ မငျးရဲ့ career ကို ပွောငျးလိုကျလို့ရပါလိမျ့မယျ။
start up တဈခု စလိုကျလို့ရပါတယျ။ project တှေ လုပျဆောငျပါ။
မငျးရဲ့ ဗဟုသုတတှေ စိတျကူးတှကေို ပုံဖျောဖို့ မငျးအလုပျက အခှငျ့အရေးမပေးရငျမငျးကိုယျတိုငျ ရှာဖှလေုပျဆောငျပါ။
volunteer project တှေ လုပျနိုငျပါတယျ။ ကိုယျနဲ့ ဝါသနာတူတှနေဲ့ ပေါငျးပွီး အဖှဲ့လိုကျပူးပေါငျးလုပျဆောငျကွညျ့ပေးပါစမျးသပျကွညျ့ပါ။
ကိုယျစိတျဝငျစားတဲ့အရာတှေ လလေ့ာပါ။ လကျတှေ့ လုပျဆောငျကွညျ့ပါ။
Network တညျဆောကျပါ။ မငျးရဲ့ အလုပျလမျးကွောငျးမှာ ဖွောငျ့ဖွူးဖို့ strong connection network တဈခု ရှိနဖေို့ လိုပါတယျ။
ဒီလိုမြိုးမရှိဘူးဆိုရငျတော့ မငျးရဲ့ အခြိနျထဲက ဖဲ့ပွီး လုပျဆောငျရပါလိမျ့မယျ။
အတျောဆုံး မိတျဆှတှေကေို ဆကျသှယျပွီး သူတို့ရဲ့အကွံဉာဏျတှေ ရယူတာတှေ သတငျးတှေ အခကျြအလကျတှေ ဗဟုသုတတှေ ရအောငျလုပျပါ။
professional life ထဲကဆရာကွီးတှဆေီက လလေ့ာသငျယူကွပါအလုပျက အိမျပွနျရောကျလို့ ဒီလို ညခမျြးတှမှော အနားယူတယျဆိုပွီး movie ကွညျ့တာ
tv ကွညျ့တာ game ကစားတာ social media ပျေါမှာ သူမြားတေ အကွောငျး လိုကျစပျစုနတော အတငျးပွောနတော ဒါတှနေဲ့
အခြိနျကုနျဆုံးရတာ အရမျးပြျောစရာကောငျးမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဒါတှကေ မငျးရဲ့ အနာဂတျကို ကောငျးမှနျအောငျ လုပျပေးနိုငျမှာ
မဟုတျပါဘူး။မငျးဘဝရဲ့ အပွောငျးအလဲက ဒီနညေ့က စပါပွီ။6နာရီကနေ ည ၁၂ နာရီထိပါ။ အလုပျပွီးလို့ မငျးအိမျပွနျတယျ။ မငျးဟာ
တဈခွားသူတှေ ခိုငျးတဲ့အရာတှကေို လုပျစရာမလိုတဲ့အခြိနျပါ။ မငျးရဲ့ အားလပျခြိနျပါ။ ဒါကို မငျးဘယျလို အသုံးခမြလဲ?
သင့်လက်ဖ၀ါးပေါ်မှာ သင့်ရဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်စဉ်တော်တော်များများ ပါလာပြီးသားလို့ ရှေးလူကြီးတွေက ဆိုကြပါတယ်။ ခုလည်း သင့်ရဲ့လက်ဖ၀ါးပေါ်က နှလုံးလမ်းကြောင်းလေးကိုကြည့်ပြီး သင့်စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အနာဂတ်ချစ်သူကို မှန်းကြည့်ရအောင်လားနော်..။ နံပါတ် (၁) အမျိုးအစား ပုံထဲကလို ဘယ်လက်နှလုံးလမ်းကြောင်းက မြင့်ပြီး ညာလက်နှလုံးလမ်းကြောင်းက နိမ့်နေသူတွေကတော့ သတ္တိရှိတယ်၊ ထက်မြတ်တယ် ။ စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်း မဆိုင်းမတွ …
လောကမှာ အစားထိုး လို့ မရတဲ့ နံပါတ်တစ်
ကောင်းလွန်းအားကြီးလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ။ “အမေ သား မနက်ဖြန် ဘွဲ့ ယူရမှာနော်…” “အမေ သိပါတယ်သားရယ်… အဲ့ဒါကြောင့် လမ်းထိပ်က ဒေါ်ကျော့ ဆီမှာတောင် အမေ အင်္ကျီ င်္အပ်ထားပါသေးတယ်…အမေ့ မှာ အင်္ကျီ အသစ်မရှိတော့ဘူးလေ…” “ဟင်..အမေ ကလိုက်မလို့ လား… အိမ်မှာ …